प्रविधीकाे अभावमा डाक्टरकाे सफलता : बालकले सिक्का निलेपछि सल्यानमै निकालियाे
छिटो खबर २०७६ माघ २७ गते सोमबार २०:३०:०२ मा प्रकाशित
सल्यान अस्पतालले सोमबार एक जटिल केस समाधान गरेको छ । बागचौर नगरपालिका वडा नं. १० का ५ वर्षीय बालक सन्तोष केसीले सिक्का निलेर घाँटीमा अड्किएपछि सल्यान अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याईएको थियो । उपकरण र प्रविधीको अभावका कारण उपचार सम्भव नदेखिए पनि अभिभावकले यहीँ उपचार गरिदिन पटक पटक अनुरोध गरेका थिए ।
उपचार जोखिम पूर्ण छ भन्ने थाह भएतापनि डा. प्रदिप शर्माले यसको जोखिम लिएका थिए । बालकका अभिभावकहरुले बाहिर लैजान सक्ने आर्थिक अवस्था नभएको भन्दै यहीँ उपचार गरिदिन धेरै पटक अनुरोध गरे पछि डा. शर्मा र उनको टोलीले यो जोखिम लिन तयार भएको बताईएको छ ।
यस्तो केसको उपचार सल्यानमै पहिलो पटक भएको हो । डा. शर्मा र उनको टिमले पटक पटकको अथक प्रयास पछि सिक्का निकाल्न सफल भएको अस्पतालका रेडियो ग्राफर कोमल प्रकाश वलीले बताए ।
विरामी प्रति चौविसै घन्टा समर्पित र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टरको रुपमा जिल्लामा डा. प्रदिपको पहिचान रहेको छ । रेडियो ग्राफर ओली भन्छन “प्रविधीको अभावमा पनि सफल उपचार गर्ने डा. प्रदिप र उहाँको टोली धन्यवादको हकदार रहेको छ ।”